सानो गल्तीले सांसद जोशीकी परी जस्ती नातिनीले संसार छोडेर विदा भइन ! – yuwa Awaj
सानो गल्तीले सांसद जोशीकी परी जस्ती नातिनीले संसार छोडेर विदा भइन !
मंग्सिर ४, २०७७ बिहिबार 0
काठमाडौं : जीवनमा मानिसले त्यस्ता गल्तिहरु गर्छन् जसलाई चाहेर पनि कहिल्यै भुल्न सम्भव हुँदैन । त्यस्ता घ’टनाहरु तपाईंको आँखामा क्षण–क्षणमा दृश्यका रुपमा रहिरहन्छ । यस्तै घट’ना अहिले बाहिर आएको छ ।
तपाईंले अहिले यो समाचारमा देखि रहनुभएकी बालिका यो संसारमा अब र’हिनन् । तिहारको रौनकतामा रमाउँदा–रमाउँदै उनले यो संसार छो’डेर सदाका लागि विदा भएकी छिन् । आफ्ना आमाबाबु, हजुरआमा र हजुरबुवा लगायत सबैलाई छो’डेर यो संसारबाट सदाका लागि वि’दा भएर गएकी छिन् ।
उत्तर प्रदेशको प्रयागराज लोकसभा सीटबाट भाजपा सांसद रीता बहुगु’णा जोशीको घरमा शो’कको पहाड बनेको छ । उनकी छ वर्षीया नातिनी, किआ, तिहारमा राती पटा’खा चलाउँदा नराम्ररी घाइ’ते हुन पुगिन् । तर सबैलाई दुःखी बनाउँदै मंगलबार उपचारको क्रममा सबैलाई छो’डेर गईन् ।
तिहारको राती किआलाई पटा’खाले घा’इते बनाएपछि अस्प’तालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँ उनको उप’चार भइरहेको थियो । तिहारमा सांसदकी बुहारी रिचा छोरी किआसँग पोनाप्पा मार्गमा उनको माइतीघर गएकी थिइन् ।
सभासद् इन्चा’र्ज अभिषेक शुक्लाका अनुसार घरको छानामा धेरै केटाकेटीहरू खेलिरहेका थिए । त्यस समयमा कसैले पटाका चलायो, ​​जसले किआलाई नराम्ररी घाइ’ते बनायो ।
उनलाई तत्का’ल अस्पताल लगियो जहाँ डाक्टरहरूले ६० प्रतिशतसम्म क्ष’ति भएको रिपोर्ट दिए र अवस्था चिन्ता’जनक भएको बताए । सांसदको एक मात्र छोरो मयंकको २००७ मा वि’वाह भएको थियो । किआ उनकी एकमात्र छोरी थिइन् ।
केहि दिन अघि मात्रै रीता बहुगुणा जोशीकी बुहारी रिचाको नातिनी किआ कोरोना सका’रात्मक रहेको पाइएको थियो । तीनै जनालाई पीजीआई लखनऊबाट मेदान्त दिल्लीमा सारियो जहाँ सांसदका पति पीसी जोशी पहिले नै उप’चाररत थिए ।
उनको स्वास्थ्य बिग्रँदा सांसदलाई आईसी’यूमा भर्ना गर्नुपरेको हो । १५ सेप्टेम्बरमा, उनी आईसी’यूबाट बाहिर आए र अस्प’तालमा नै उनको श्रीमानको जन्मदिन मनाईन्
उनलाई २१ सेप्टेम्बरमा अस्पतालबाट डि’स्चार्ज गरियो । त्यस पछि उनलाई दिल्लीको निवासमा अलग राखियो । निको भएपछि प्रयागराज दीपावली मनाउन आएका थिए यो बीचमा कहिल्लै बिर्सन नसक्ने दु’र्घटना भयो ।
अब त्यो परिवारका लागि यस वर्षको तिहार कस्तो भयो भनेर हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । समग्रमा तिहार उनीहरुका लागि प्रत्येक वर्ष घच्घच्याउने खालको भइरहनेछ । सामान्य ख्याल नगर्दा परीजस्ती छोरी उनीहरुले गु’माउनुपरेको छ ।
हामी सबै अभिभावकहरुलाई अनु’रोध गर्दछौँ, कृपया आफ्नो बच्चाको विशेष ख्याल गर्नुहोला । तपाईंलाई कहिल्लै पनि थाहा हुँदैन, तपाइले आफ्नो मु’टुमा राख्नुभएको सन्तान कुनबेला तपाईंबाट सदाका लागि टाढा भएर सक्छ ।
विशेषगरीकन सानो बच्चालाई छत लिएर छोड्ने, विभिन्न सामग्रीहरु चलाउन दिनेलगायत कामहरू गराउँनु हुँदैन । यदी त्यस्तो हुँदैछ भने आफुले बच्चामाथि सिंगो ध्यान लगाउनुपर्छ ।
कतिपय अभिभावकहरुले बच्चालाई ग्याँ’स चलाउन सिकाउने, कतिपयले राइस कु’करमा खाना पकाउन सिकाइरहनु भएको हुन्छ, कतिपयले विभिन्न क’रेन्ट प्र’वाह हुने खालका उपकर’णहरु चलाउन सिकाउनुहुन्छ ।
कतिपय अभिभावकहरुले बच्चालाई ग्याँस चलाउन सिकाउने, कतिपयले राइ’स कुक’रमा खाना पकाउन सिकाइरहनु भएको हुन्छ, कतिपयले विभिन्न करेन्ट प्रवा’ह हुने खालका उपकरणहरु चलाउन सि’काउनुहुन्छ ।
खेल्दै गर्दा कसैको ध्यान नपुग्दा नदी’नालाहरुमा परेर ज्या’न गुमा’एका बच्चाहरुको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । यदी सानो सानो कुरामा तपाईंले गरेको सानो गल्ति सानो लापरवाही ले तपाईलाई जीवनभर रु’वाउने छ ।
Prevदुईमध्ये एक पद छोड्दा राम्रो हुने’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ राजदूतको सुझाव…हेर्नुहोस् ।
Nextहार्दिक बधाई ! जर्मनीमा निःशुल्क चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी सम्मानित, ४ वर्षसम्मका लागि मासिक रु १ लाख ४० हजार प्राप्त गर्ने !
नेता ज्ञवाली भन्नुहुन्छ : भ्रष्टाचारिलाई सरकार पाता फर्काएर जे’ल हाल्छ !